သင့်အတွက်ကိုက်ညီမဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နည်း – The Myanmar Gentlemen Supplies
သင့်ဆံပင်အမျိုးအစား၊ သင့်ဆံပင်ပုံစံနဲ့ လုံးဝကိုက်ညီမဲ့ စိတ်ကြိုက် ခေါင်းလိမ်းဆီကိုရှာရတာ ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဗျ...
ခေါင်းလိမ်းဆီဆိုတာက အမြင်နဲ့ကြည့်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်ကို ဘယ်လိုပုံစံအနေအထားပေးမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူး။ တော်ရုံတန်ရုံဆိုင်ကလည်း ဘူးကိုဖွင့်ပြီး အစမ်းပေးသုံးတာမျိုးမရှိဘူးလေ။ အစမ်းအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်နေ့စဉ် အသုံးပြုတဲ့ပုံ၊ အသုံးပြုတဲ့ပမာဏနဲ့က တူမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် တစ်ခေါက်လောက်အသုံးပြုကြည့်ရုံနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကိုက်မကိုက်ဆိုတာ သိချင်မှသိဦးမှာကိုး။
ဒါကြောင့်ခေါင်းလိမ်းဆီတွေက သင်ရေမိုးချိုး၊ ခေါင်းလျှော်ပြီး နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြ Lifestyle အတိုင်းကို သုံးသွားရင်းနဲ့မှ...
ဒီတော့ သင်ဆံပင်နဲ့ သင့်တော်မဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ပြီးဝယ်ယူကြမလဲ???
#mmgents မှ သင့်ဆံပင်အမျိုးအစားနဲ့ ဆံပင်ပုံစံအတွက် အနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီစေမဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ရွေးချယ်နည်းစနစ်လေးတစ်ခု ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။
ခေါင်းလိမ်းဆီများကိုရွေးချယ်ရာမှာ ဖြီးလိမ်း၊ ပုံသွင်းရာမှာ အဓိကကျတဲ့အချက်အလက်တွေအနေနဲ့ Hold, Shine, Application, Restylability, Washability, Scent အစရှိတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီများရဲ့ ဒီအချက်အလက်တွေကိုသိထားမှသာ သင့်ဆံပင်အမျိုးအစားနဲ့ သင်လိုချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံအတွက် သင့်တော်မလားဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဗျာ... ဆက်လက်ရေးပေးထားတဲ့ အချက်အလက်များကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီး သင်နဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်စေမဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီများကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လိုက်ကြရအောင်။
1. Hold - ထိန်းအား
Hold ကတော့ ဆံပင်ပုံစံထိန်းထားနိုင်မှု၊ ပုံမပျက်မှု၊ နေရာမရွေ့မှုပေါ့ဗျာ။ သူကတော့ Heavy Hold, Strong Hold, High Hold, Medium Hold, Light Hold စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ Strong နဲ့ Heavy Hold တို့ကတော့ ထိန်းအားအများဆုံးတွေဖြစ်ပြီး Light Hold ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထိန်းအားကိုပေးပါတယ်။ #mmgents မှ Product Picture များရဲ့ Hold နေရာမှာ ကျားခေါင်းလေးတွေပိုများလေ Hold ပိုများလေဖြစ်ပြီးတော့၊ နည်းရင်တော့ Hold ပိုနည်းတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာသင့်ဆံပင်ပုံစံကို တိတိကျကျနဲ့ လုံးဝပုံကျနေစေချင်တဲ့သူဆိုရင်တော့ Hold များတဲ့အမျိုးအစားတွေရွေးပေးနိုင်ပြီး၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆံပင်ပုံစံဆိုရပြီဆိုရင်တော့ Hold လျော့တာမျိုးရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သင်ဟာဆံပင်အထောင်ထားလိုသူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ကမ္ဘာမြေရဲ့ဆွဲငင်အားကိုဆန့်ကျဉ်ပြီး ပုံစံကိုထိန်းထားရ မှာဖြစ်တဲ့အတွက် သေချာပေါက် Hold ကောင်းတဲ့ အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပေးရပါမယ်။
2. Shine - ဆံပင်တောက်ပစေမှု
လွယ်လွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Shine ဆိုတာ ဆံပင်အရောင်တောက်ပစေမှုပါပဲ။ ဘယ် Product ပဲသုံးသုံး ဆံပင်က အလင်းအရောင်ကို ပြန်တယ်၊ ဆံပင်အရောင်ကိုတောက်ပစေတယ်ဆိုရင် Shine ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း Super High Shine, High Shine, Medium Shine, Low Shine, Matte Finish စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ High Shine, Super High Shine တို့ကတော့ ဆံပင်အရောင်အတောက်ပဆုံးဖြစ်ပြီး Matte Shine ကတော့ အမှိန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ #mmgents မှ Product Picture များရဲ့ Shine နေရာမှာ ကျားခေါင်းလေးတွေပိုများလေ Shine ပိုများလေဖြစ်ပြီးတော့၊ နည်းရင်တော့ Shine ပိုနည်းတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်က ဆံပင်အရောင်ပြောင်တာကြိုက်ရင် Shine များတာလေး ရွေးပေးနိုင်ပြီး၊ ခပ်မှိန်မှိန်လေးပဲ သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Shine နည်းတာကိုပဲ ရွေးဝယ်တာက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ လုံးဝအမှိန်မှ သဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ Shine လုံးဝမပါတဲ့ Matte Finish ကို ရွေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Shine က သင့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုနဲ့ စိတ်နေသဘောထားမှာပဲသက်ဆိုင်သွားမှာပါ။
3. Application - ဖြီးလိမ်းပုံသွင်းနိုင်မှု
Application ဆိုတာကတော့ ဒီခေါင်းလိမ်းဆီကို ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကို အကြမ်းဖော်ပြပေးတဲ့အချက်ပါ။ ဒီမှာ ရွေးချယ်စရာ Smooth ၊ Medium နဲ့ Dry ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိပါမယ်။ Smooth ကတော့ လိမ်းရတာ ချောချောမွေ့မွေ့ရှိတာပါ။ Dry ကတော့ လိမ်းရခြောက်သွေ့ပြီး တိတိကျကျပုံသွင်းနိုင်မယ်။ Medium ကတော့ နာမည်အတိုင်းပဲ ချောမွေ့မှုနဲ့ ခြောက်သွေ့မှုတို့ရဲ့ အလယ်ကြားမှာရှိပါမယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ဆံပင်ကိုဘီးနဲ့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြီးပြီး Slick Look နဲ့ ပုံသွင်းထားချင်တယ်ဆိုရင် Smooth Application ဖြစ်တဲ့ အမျိုးအစားကိုရွေးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် လက်နဲ့ဖွပြီး Messy Look ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Dry Application ဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားကပိုသင့်တော်ပြီး၊ တိတိကျကျလက်နဲ့ပုံသွင်းနိုင်စေပါတယ်။ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်နဲ့ Textured ပုံစံလေးသွားချင်ရင်တော့ Medium Application ကိုရွေးပေးလို့ရပါတယ်။
ဒီ Application သုံးမျိုးကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ သင်ထားလိုတဲ့ ဆံပင်ပုံစံအပြင်၊ သင့်ဆံပင်ရဲ့ အထူအပါး နဲ့ အတိုအရှည်ကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရပါမယ်။ ဆံပင်ထူသူ (သို့မဟုတ်) ရှည်သူတွေက ချောချောမွေ့မွေ့ပုံသွင်းနိုင်စေဖို့ များသောအားဖြင့် Medium to Smooth Application နဲ့ ဆိုသင့်တော်တတ်ကြပြီး၊ ဆံပင်ပါးသူ (သို့မဟုတ်) တိုသူတွေကတော့ တိတိကျကျပုံသွင်းနိုင်အောင် Medium to Dry Application နဲ့သင့်တော်တတ်ကြပါတယ်။
ဆံပင်ကောက်သားရှိသူတွေအတွက်ကတော့ Medium to Smooth Application ရှိတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကို ဘီးနဲ့အသုံးပြုပေးပြီး ကောက်သားပြေတဲ့ ပုံသွင်းပေးနိုင်သလို၊ Medium to Dry ရှိတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကို လက်နဲ့ပုံသွင်းပေးပြီး ကောက်သားကိုပေါ်အောင်ထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ယေဘူယအားဖြင့် သင့်တော်တာတွေပါ။ ကိုယ့်အကြိုက်နဲ့ ထားချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံကိုလိုက်ပြီးလဲကွဲပြားတတ်ကြပါတယ်။
4. Restylability - ဆံပင်ပုံစံပြန်ပြင်နိုင်ခြင်း
#mmgents မှ ရရှိနိုင်တဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေမှာ ရေနဲ့ဆံပင်ကိုပြန်ပြင်နိုင်တဲ့ Restyalibility - With Water ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေနဲ့ ရေလဲမလိုပဲ အချိန်မရွေးစိတ်ကြိုက် ဆံပင်ပုံစံကိုပြန်ပြင်နိုင်စေမဲ့ Restylability – Anytime, Anywhere ဆိုပြီး နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
ဒီအပိုင်းကတော့ ဘော်ဒါတို့ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံ၊ နေထိုင်မှု Lifestyle နဲ့ပဲ တွဲပြီး စဉ်းစားရမယ့်အပိုင်းပါ။ တချို့က ဆံပင်ကို အိမ်ကထွက်လာပြီးရင် တော်ရုံတန်ရုံဆံပင်ပြန်ပြင်လေ့မရှိပဲ စိတ်ကြိုက်ပုံသွင်းထားတဲ့အတိုင်းရှိနေစေချင်ကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ ရေအသုံးပြုပြီး ဆံပင်ပြန်ပြင်နိုင်တဲ့ Restylability – With Water အမျိုးအစား တွအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။
တချို့ကျတော့လည်း ဆံပင်ကို ရောက်တဲ့နေရာ၊ ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာ လိုချင်တဲ့အတိုင်း ပြန်ပြင်လို့ရတာကို သဘောကျကြတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီအခါမှာ အအချိန်မရွေးစိတ်ကြိုက် ဆံပင်ပုံစံကိုပြန်ပြင်နိုင်စေမဲ့ Restylability – Anytime, Anywhere အမျိုးအစား တွအသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ကိုပြန်ပြင်ဖို့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ အိပ်ဆောင်ဘီးလေးများကို ဆောင်ထားဖို့တော့အကြံပြုချင်ပါတယ်။
5. Washability - ခေါင်းပြန်လျှော်နိုင်စွမ်း
ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကိုလိမ်းပြီးသွားရင် ခေါင်းပြန်လျှော်နိုင်စွမ်း သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Easy, Easy with Little Build Up နဲ့ Has Build Up လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဒါကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် Build Up ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်သိထားဖို့လိုပါတယ်။ Build Up ဆိုတာ ခေါင်းလျှော်ပြီးတဲ့အခါ ဆံပင်မှာကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီမှာပါဝင်တဲ့ တာရှည်ခံအဆီကိုခေါ်တာပါ။ Build Up effect ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့အချက်တွေကတော့ သင့်ဆံပင်အစိုဓာတ်ကို အစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ရေ၊ ချွေး၊ အစိုဓာတ်၊ ရာသီဥတုနဲ့ မိုးဒဏ်ကိုပိုပြီးခံနိုင်ခြင်းပါ။ ဒါကြောင့်လည်းခေါင်းလျှော်ပြီး အဆီကျန်ခဲ့တာမို့လို့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လိမ်းတဲ့အခါမှာ ခေါင်းလိမ်းဆီကို အနည်းငယ်သာထပ်အသုံးပြုပေးဖို့လိုပြီး Hold ကိုလည်းပိုပြီးမြှင့်တင်ပေးသွားပါတယ်။ ဆံပင်ကို Blowdryer မှုတ်အခြောက်ခံတဲ့အခါမှာလဲ အပူဒဏ်ကနေအကာအကွယ်ပေးပါတယ်။ ဒီအတွက်တွေကြောင့် Build Up ပါရှိတဲ့ ခေါင်းလိမ်းဆီတွေကို ဆံပင်ကိုပြောင်အောင်ပြန်ပြီး ခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုရင်တော့ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Washability အကြောင်းကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်…
- Easy ဆိုတာက အလွယ်တကူ ခေါင်းပြန်လျှော်နိုင်စွမ်းရှိပြီး Build Up ပါရှိခြင်းမရှိပါဘူး။ များသောအားဖြင့် ရေ သို့မဟုတ် Shampoo နဲ့တင်အလွယ်တကူပြောင်အောင်ဆေးချနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
- Easy with Little Build Up ဆိုတာကတော့ Build Up Effect အနည်းငယ်ပါရှိပြီး၊ များသောအားဖြင့် Shampoo ကို အသုံးပြုပြီး ခေါင်းကိုပြောင်အောင်ဆေးချနိုင်ပါတယ်။
- Has Build Up ဆိုတာကတော့ Build Up အကောင်းဆုံးပါရှိပြီး Build Up Effect ကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေပါ။ ခေါင်းလျှော်ရာမှာတော့ ပြောင်အောင်အချိန်ပေးရပါတယ်။
ဒီတော့ သင့်ရဲ့ daily lifestyle က နေ့စဉ်ခေါင်းလိမ်းဆီတစ်ခုလိမ်းထားပေးဖို့လိုတယ်ဆို Build Up ပါရှိတဲ့ အမျိုးအစားတွေကို အသုံးပြုပေးလို့ရပြီး၊ ခေါင်းကိုပြောင်အောင်ဆေးချတာမှနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ Washability Easy ဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားတွေရွေးချယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
6. Scent - အမွှေးရနံ့
ဒီနောက်ဆုံးအချက်ကတော့ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ရွေးချယ်ရလွယ်ကူအောင်လဲ #mmgents မှ အမျိုးအစားတိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ ရနံ့များကို အနီးစပ်ဆုံး သိနိုင်အောင်Product Picture တွေမှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အချို့အမျိုးအစားတွေက အမွှေးရနံ့မပါတဲ့ သဘာဝရနံ့အမျိုးအစားတွေလဲ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဒီပြောပြပေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့ မိတ်ဆွေတို့ ခေါင်းလိမ်းဆီရွေးချယ်မှုမှန်ကန်ဖို့သိထားသင့်တဲ့အချက်တွေပါ။ တစ်ခုဂရုပြုရမှာကတော့ ခေါင်းလိမ်းဆီရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ သင့်ဆံပင်အမျိုးအစားနဲ့ သင်ညှပ်ထားတဲ့ ဆံပင်ပုံစံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးဖို့ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ဆံပင်က ဆံလုံးတုတ်ပြီး၊ ဆံကြောမာနေတာကို နှစ်လက်မ သုံးလက်မလောက်ပဲအရှည်ညှပ်ထားရင်တော့ ဘယ်လိုပဲဖြီးဖြီး၊ ဘေးခွဲရလာမှာမဟုတ်ပဲ ဆံပင်ကပြန်ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ညှပ်ထားတဲ့ဆံပင်ပုံစံက ကိုယ်သွားချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံနဲ့လည်း ကိုက်ညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဒီအချက်တွေကိုသိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ဆံပင်အမျိုးအစားနဲ့ လိုချင်တဲ့ဆံပင်ပုံစံအတွက် အနီးစပ်ဆုံးကိုက်ညီစေမဲ့ နိုင်ငံတကာသုံး ကမ္ဘာကျော်အရည်အသွေးမြင့် ခေါင်းလိမ်းဆီအမျိုးမျိုးကို #mmgents မှစတင်ပြီး စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှာယူလိုက်နိုင်ပါပြီ။
ရရှိနိုင်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ဈေးနှုန်းနှင့် အချက်အလက်အပြည့်အစုံတို့ကို Webstore: www.mmgents.com တွင်ကြည့်ရှုပြီး...
Webstore www.mmgents.com (သို့မဟုတ်) Facebook Messenger: m.me/mmgents (သို့မဟုတ်) Hotline: 09789206464 တို့တွင် အလွယ်တကူမှာယူနိုင်ပါတယ်။